Mirehareha ny amin’ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty
"Hoy Jesôsy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay." - Jao. 11:25,26.
Taorian'ny nanomboana an'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, dia tsy nahatsapa ho nahazo ilay fandresena nantenainy akory ireo mpisorona sy mpanora-dalana. Tsy nifaly tamin'ny fahombiazany izy ireo tamin'ny nampanginany ny feon'ilay Mpampianatra Lehibe. Natahotra izy ireo. Ny fahafatesany dia efa nampitodika ny sain'ny olona sahady ho amin'ilay fiainan'i Jesosy sy ny toetrany. Voatsara ireo mpisorona fa tsy nahomby tamin'ny fikasany hamaly faty, ary dia natahorany bebe kokoa, eny natahorany be lavitra aza i Kristy maty noho Izy velona (...)
Nanodidina ny fasana ny fahazavana avy any an-danitra, ary ny voninahitr'ilay anjely no nanazava ny lanitra manontolo. Nanatona ny fasana ilay anjely, nakodiany tahaka ireny vatokely ireny ilay varavaram-pasana, ary nipetraka teo amboniny izy. Avy eo dia re ny feony nanao hoe: Ry Zanak 'Andriamanitra, mivoaha, miantso Anao ny Rainao; ary dia nivoaka avy tao am-pasana i Jesosy, ny famindrany dia toy ny an'ny Mpandresy Mahery. Nisy horakora-pandresena tamin'izay satria ny fianakavian'ny lanitra no efa niandry handray Azy; ary ilay anjely mahery, narahin'ny tafiky ny lanitra, dia niankohoka teo anatrehany nitsaoka Azy, Ilay Mpanjakan'ny lanitra, sady nanao izao fanambarana izao Izy, teo amin'ilay fasana nindramina tamin'i Josefa, nanao hoe: "Izaho no fitsanganana amin'ny maty sy fiainana." - YI, 28 Jolay 1898.
Ny sitrapo sy ny herin'Andriamanitra no manome fiainana ny voary manontolo. Mpandray aina avy amin'ilay Zanak'Andriamanitra izy ireo. Na mahay sy manan-talenta toy inona aza izy ireo, na lehibe toy inona aza ny fahafaha-manao ananany, dia aina avy amin'ilay Loharanon'ny aina rehetra ihany no mameno sy mamatsy azy. Izy no Loharano nipoiran'ny aina (...) Aina izay nafoiny ho an'ny olombelona, kanefa noraisiny indray ary nomeny ny olombelona. "`Izaho avy,' hoy Izy, mba hananany fiainana, sady hananany be dia
Tonga olombelona i Kristy mba hahafahan'ny olombelona ho tonga ho iray fisainana sy fiainana Aminy. Noho io firaisana io, izay fiaraha-mankato ny Tenin'Andriamanitra, dia manjary fiainan'izy ireo ny Fiainan'i Kristy. Hoy Izy amin'ireo izay mibebaka: "Izaho no fananganana ny maty sy fiainana". - YI, 4 Aogositra 1898.